यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई । – Kavrepati
Home / रोचक / यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई ।
admin July 29, 2021	रोचक Leaveacomment 123 Views
जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो ।यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा।लीले काभ्रेका विभिन्न ६ वटा सामुदायिक वनमा चारकोल बनाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।कम्पनीले किसानहरुले तयार पारेको चारकोल किनिदिने समेत गरेको छ । गाउँमा तयार भएको चारकोल
Previous यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको जोखिम, यी संकेत देखा परे वेवास्ता नगर्नुहोस्
Next कहाँ छन युटुबर भाग्य न्यौपाने ? हेर्नुहोस